पैसामा चित्त बुझ्नु प¥यो
कुनै पनि व्यवसाय किन्नलाई चाहिने पहिलो वस्तु भनेको पैसा नै हो । बेच्ने र किन्न चाहनेको बीचमा व्यवसायको मुल्यमा चित्त बुझेमा किनबेचको प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्छ । मुल्यको निक्र्यौल गर्नुभन्दा अगाडी स्थान, भाडा, संचालन खर्च, कर्मचारीको ज्याला आदिको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । व्यवसाय किन्नु भनेको वर्षौसम्मको आर्थिक जिम्मेवारी पनि हो, त्यसैले खाली हतारिएर किन्नेभन्दा पनि आफूसँग व्यवसायलाई भविष्यसम्म लैजाने, अनि थेग्ने आर्थिक तथा व्यबस्थापन क्षमता छ छैन भन्ने कुराको ख्याल राख्नुपर्छ । ख्याल—ख्याल र रहरमा हतारिएर व्यवसाय खरिद गर्दा कालान्तरमा कानुनी तथा आर्थिक संकट पर्न सक्छ ।
कुन संरचनामा जाने ?
पैसा वा मुल्यमा चित्त बुझेपछि भनेको दोस्रो ख्याल गर्नुपर्ने कुरो भनेको कुन संरचनामा व्यवसाय किन्ने अनि संचालन गर्ने हो । सोल ट्रेडर या कम्पनी या पार्टनरसीप, कुन संरचनामा जाने सुरुमै ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नो अवस्था अनि उद्धेश्यलाई मिल्दो संरचना सुरु देखिन छनोट गर्दा, घरभाडा लिदा बन्ने कन्ट्रयाक्ट प्रक्रियामा सहज, यौटै एबीएन नम्बर अटुट रहने अनि व्यवसायको गुडवील बढ्दै जाने सम्भावना रहन्छ ।
बिक्रि सम्झौता -सेल कन्ट्रयाक्ट- मा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु के—के हुन् ?
बिक्रि मुल्य त्यसभित्र पनि उपकरण, अन्य सामग्री या गुडविल प्रत्येकको मुल्य खुलाएर राख्दा भविष्यमा लेखापालनलगायतका लागि सहज हुन्छ । बेच्ने र किन्नेको नाम प्रष्ट रुपमा लेखिनुपर्छ । यदि तपाई कम्पनीको रुपमा खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने क्रेताको नाममा कम्पनीको नाम हुने गर्दछ ना कि तपाइको व्यक्तिगत नाम । त्यस सँगसँगै व्यापारको आय—व्यय विवरण, अहिले काम गरिरहेका कामदार, ग्राहक र आपूर्तिकर्ता आदि कुरा मा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
व्यापार किन्दैमा घर भाडा लिज पाइने निश्चित हुदैन्
धेरैमा एक प्रकारको सोचाइ भएको पाइन्छ कि मैले पसल या रेष्टुरेन्ट किने भने मलाई स्वतः घरभाडा मिल्नेछ । तर, वास्तविकता त्यो हैन् । पहिले व्यापार गर्नेले लिएको भाडा ९लिज० स्थानान्तरण ९ट्रान्सफर० गरेपछि या घर धनिले तपाईंलाई त्यसको स्वीकृति दिएपछि या तपाईंसँग नयाँ भाडा ९लिज० सम्झौता गरे पछि मात्र तपाईं त्यो ठाउँमा कानुनी रुपमा व्यापार संचालन गर्न पाउनु हुन्छ । होइन भने घर धनीको बिना स्वीकृति संचालन गरिएको पाइएमा, घर धनीले ताल्चा लगाइदिने मात्र हैन अरु हर्जाना माग्न पनि सक्छ ।
बेच्ने मान्छे र किन्ने मान्छे राजी भएपछि, आखिर भाडा तिर्न सकि हाल्छु, के घर धनीले नाइँ भन्ने पनि हुन सक्छ ?
अवस्य । तपार्इंले माथि ४ नम्बरमा लेखिएको कुरा ध्यान दिनु भएन भने फस्ने काम हुन सक्छ । भाडा तिर्न हम्मे—हम्मे परेका, अपर्झट व्यापार बेचेर विदेश लाग्ने तयारी गरेका, व्यापार धान्न नसकेर थाकेका या किनेको केही समयमै गलत ठाउँमा फसेको ठानेका यावत कारणले बिक्रीमा राखिएको हुन सक्छ । अरु सफल भएनन् भन्दैमा तपाईंको पनि त्यहि गति हुन्छ भन्ने छैन् । तपाईंले उभन्दा राम्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर घर भाडा -लिज-को ठेगान नभई हाम फाल्दा भने पछि समस्या पर्छ ।
कति वर्षको घर भाडा -लिज-लाई राम्रो मानिन्छ ?
यसको जवाफ सजिलो छैन् । कुनै पनि व्यापारले एकै रातमा फलिफाप गराउँदैन् । त्यसका लागि मेहेनत, लगाव अनि समय लाग्छ । त्यसैले छोटो समयको लिजको समस्या, तपाइलार्इं ब्यापारको समीक्षा गर्न आवश्यक समय नपुगी सकेको हुन सक्छ । अनि कथम कदाचित व्यापार बिक्रि गर्नुप¥यो भने किन्ने मान्छेका लागि लिज अपर्याप्त लाग्न सक्छ ।
लामो समयको घरभाडा -लिज- उचित हो त ?
लामो समयको घर भाडा ९लिज०का पनि आफ्नै व्यथा छन् । यदि व्यापार टिकाउ छैन भने ताल्चा नै लगाउनु भो भने पनि व्यवसायिक लिजको सवालमा कानुन कडा छ, तपाईंले लिजको अवधीभरिकै पैसो तिर्नुपर्छ । खासगरी कानुनले व्यवसायिक बातचितबाट भएका सम्झौताको हकमा दुवै पक्षलाई सबल ठान्छ । उपभोक्ताले प्राय ढक ढक्याउने फेयर ट्रेडिङ्गको ढोका ब्यापारीको हकमा उपलब्ध हुँदैन । त्यसको मतलब अदालतको ढोका ढक ढक्याउनु पर्ने हुन सक्छ, जुन धेरै महंगो र झन्झटिलो हुन सक्छ ।
व्यापार किनबेचका लागि कानुनी सल्लाह या वकिलसँग परामर्श लिन जरुरी छ ?
व्यापार या घर भाडा -लिज- सम्झौता अनि यसका परिच्छेदहरुको सुक्ष्म अध्ययनका लागि कानुनी सल्लाहको जरुरी हुन सक्छ । प्रायः मान्छेमा व्यापार किन्दा त्यसको मुल्य अनि घर भाडाको दर कति हो भन्ने कुरामा मात्र ध्यान जान्छ । बेच्ने मान्छेसँग या घर धनीसँग हुने सम्झौता भनेको कानुनी कागज हो र यो सम्झौता प्रक्रियागत किसिमले अगाडी बढेका हुन्छन् । त्यसले भविष्यमा हुन सक्ने कठिनाई, झैँ झगडा, खिचातानी आदिका बेला सान्दर्भिकता र अर्थ राख्छ । हुन त हस्ताक्षर गर्न मात्र त यौटा कलम नै पर्याप्त हुन सक्छ ।